Olee otú ichiniike Mars - News Ọchịchị
Olee otú ichiniike Mars
Isiokwu a na-akpọ “Olee otú ichiniike Mars” e dere site Sara Bruhns na Jekọb Haqq-Misra, maka theguardian.com on Thursday 5th November 2015 10.40 UTC
NASA ka a tọhapụrụ a akụkọ nwere zuru ezu atụmatụ maka a mmadụ ozi na-Mars. Nke a kemgbe a Dịteworo ihe mgbaru ọsọ NASA ha na akụkọ obụk ịma aka nke Mars ngagharị na atọ. Nke mbụ, 'Earth reliant', ogbo na-elekwasị anya nnyocha n'ụgbọ ahụ International Space Station. The 'Ikwesị Ground' ogbo ewepụta ụmụ mmadụ miri n'ime ohere maka nnyocha, mgbe fọdụrụ ụbọchị ole na ole si Earth. The 'Earth Independent' ogbo completes atụmatụ site na-ụmụ mmadụ na-elu nke Mars.
NASA bụ bụghị nanị nzukọ akwadebe izipu ụmụ mmadụ na-acha ọbara ọbara planet. SpaceX, Dennis Tito si N'ike mmụọ nsọ Mars Foundation, na Mars One nwere niile gosipụtara ebumnuche ileta na na ụfọdụ ọbụna ichiniike Mars.
Tupu ihe ọ bụla mba ma ọ bụ òtù na-amalite ịgagharị na guzosie ike niile, ambiguities mba na mba iwu banyere ohere ngagharị na mmezi ga-ha ghọta na kpebiri. The nwere akwụ ụgwọ, ego na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ileghara a nke ọbụbụeze na ohere bụ kwa elu na-ekwe ka ndị a ozi atụmatụ ịzụlite ukwuu n'ihu.
Ugbu A ohere ngagharị amụma bụ n'ụzọ dị ukwuu kọwaa site Outer Space Treaty, dere 1967. Nke a Treaty Ogwe ya signatories si wụnye ngwá agha ọgwụrụ na ohere, egbochi ndị ojiji nke ohere udo nzube, machibidoro mba ọ bụla si na-azọrọ na ala na ihe ọ bụla dị n'eluigwe na (mara dị ka 'ndị na-abụghị appropriation ụkpụrụ'), na ekwu na ohere bụ 'nke ógbè mmadụ niile'.
The Outer Space Treaty e dere tupu ụmụ mmadụ rutere na Ọnwa, dị ka Agha Nzuzo esemokwu ndokwasa, na otú bụ emezighituri onwem iduzi N'ezie nke ohere ngagharị. Ọtụtụ nkebi ahịrịokwu nke a Treaty bụ ịrụ ụka adịghị mkpa, dị ka ukpan nke ngwá agha ọgwụrụ, na ojiji nke ohere maka nanị udo nzube. Otú ọ dị, kpam kpam mmachi na Ọkaakaa ekwu site na-abụghị appropriation ụkpụrụ pụrụ iduga n'ọdịnihu esemokwu.
Mgbe zuru ezu nkọwa maka ọ bụla chọrọ mmadụ ọzọ na-Mars (ma ọha ma ọ bụ onwe) ka nọ n'okpuru mmepe, bụ isi premise nke colonizing, ka megide nanị ịgagharị, na-eweta nchegbu. Ndị na-abụghị appropriation ụkpụrụ nke Outer Space Treaty machibidoro 'appropriation site na-azọrọ nke ọbụbụeze, site n'ọnụ eji ma ọ bụ na-arụ, ma ọ bụ site ọ bụla ọzọ n'aka '. Nke a na-egosi na omume nke amalite ịchị onwe ya bụ ekwekọghị na Treaty. Olee otú òtù ndị a bu n'obi na-ichiniike enweghị azọrọ ọbụbụeze ihe ha na-edozilighị na oké mkpa nke na-ekpebi tupu ọdịda na Mars.
Otu nwere ụzọ idozi nke a bụ site n'ilekwasị anya akụ na ụba-ekwu na ihe onwunwe na Mars kama ala ahụ n'onwe ya. Ọha na eze na onwe ọzọ nwere ike adaa na Mars na guzosie ike a isi na nke mba ha iwu ga-emetụta niile bi na ndị ọbịa-yiri ẹdude iwu ndokwa nke na-achịkwa International Space Station. Ha nwekwara ike igosi a mmachi ibé ala ebe ha pụrụ ekwu nanị akụ na ụba na ikike na omume sayensị. Otú ọ dị, dị otú ahụ 'na-ekewaghị akụ na ụba mpaghara' ga-enweghị ihe ọ bụla-ekwu na ọbụbụeze. A Mars bi ọ bụla na ógbè nwere ike ịgafe n'udo site ndị a zones, na pụrụ ọbụna melite ọzọ isi nke ha onwe ha. Otú ọ dị, niile extractable ego ẹdude n'ime na mpaghara bụ nanị nri nke mbụ klemanti. A na-amaghị na-enye otu ụzọ igbo akụ-achịkọta ihe mgbaru ọsọ nke ọtụtụ ugbu a Mars ọzọ, ikike atụmatụ maka amalite ịchị n'ihu, ma mezuo chọrọ nke Outer Space Treaty.
Ọtụtụ akwado echiche nke Mars amalite ịchị ọzọ jụrụ na ihe ọ bụla dị otú ahụ ọzọ ga- irreversibly emetọ eke gburugburu ebe obibi nke Mars, ịghọgbu nnyocha sayensị nakwa dị ka marring ndị eke mara mma nke mbara ala. Mbuso ndị a na-echegbu, a mbara ogige usoro yiri Ụwa National Park usoro nwere ike ike. Mbara ogige ntụrụndụ a ga-eji na an'Iwu dị ka ọsọ ọsọ nke Earth ọkà mmụta sayensị n'ụwa nile-na-esonụ a otutu mmadu kwenyere nlereanya tinyere edoghi nke NASA si decadal nnyocha e mere na-ahọpụta ohere ọzọ. Ụfọdụ ogige ntụrụndụ nwere ike na-emeghe naanị sayensị nchụso, mgbe ndị ọzọ nwere ike ịbụ a kpere aesthetic designation iji chebe Mars 'eke gburugburu ebe obibi.
N'ikwere n'elu a atụmatụ dị ka nke a pụrụ inye a udo ụzọ na-atụ. Otú ọ dị, na a ga-enwe mgbe nile obere esemokwu n'etiti colonists, karịsịa ma ọ bụrụ na-abụghị appropriation ụkpụrụ bụ jide tinyere amalite ịchị, dị ka ọ na mba ma ọ bụ nzukọ ga-enwe ike igosipụta zuru ezu na-achị ha na-ekewaghị akụ na ụba mpaghara. A nwa oge ikpe usoro nwere ike ịdị mma n'ụzọ nke na-edozi esemokwu dị n'etiti biri na Mars-enweghị ndị metụtara International Court nke Ikpe Ziri Ezi na Ụwa. Mgbe mmadụ abụọ chịrị abata megidere onye ọ bụla ọzọ, ha ikpe nwere ike nụrụ na-egbo site a ikpe esịnede nnọchiteanya nke ndị ọzọ chịrị. Nlereanya a na-enye ohere maka colonial ọdịmma na-chebe site idozi esemokwu nanị n'etiti colonists.
The atụmatụ depụtara n'elu bụ otu ga-ekwe omume ụzọ na-atụ. Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa ka ndị mba na òtù ịbanye a kwuo banyere otú ịnọgide na-. Ẹdude atụmatụ ichiniike Mars adịghị kwara otú ha ga-obibi na nke nke na-azọrọ na ọbụbụeze. Ma ihe ọ bụla nzukọ n'okpuru ikike nke a mba ọzọ ka Outer Space Treaty ga-mkpa noro site na Treaty si stipulations. Ikekwe ngwọta bụ re-enyocha Treaty, karịsịa ndị na-abụghị appropriation ụkpụrụ, na-ekpebi ma ọ bụrụ na nke a chọrọ bụ ka mkpa taa. Ma ọ bụ ikekwe ihe ngwọta bụ megharịa ndị Treaty ka n'ụzọ doro anya na-ekpebi a usoro nke mmezi. The-eme ugbu a bụ kwa ambiguous, na esemokwu yiri-apụghị izere ezere ma ọ bụrụ na a amalite ịchị ọchịchị kpebiri n'elu tupu ụmụ mmadụ mbụ na-abata na Mars.
Sara Bruhns mụọ physics na mbara igwe na Mahadum nke Virginia. Ọ nyochaa ihe nke ọbụbụeze na Mars na Jacob Haqq-Misra (haqqmisra) site na Na-eto eto Scientist Mmemme na Blue mabul Space Institute nke Science. The echiche ebe a bụ authors 'naanị.
33295	0 Nkeji edemede, Culture, Nkiri, Mars, Matt Damon, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị, Science, Science blog netwọk, Space
← Gị Appliances Ndi-ezu Ị Blind, agha Back! Amazon Fire HD 10 nyochaa: ịcha na-ezighị ezi na nkuku egosi a oké ọnụ ndudue →